'NASTY NASHVILLE': TENNESSEE ပြည်နယ်ရှိ TINDER - နှုန်းထားများ
Tennessee ပြည်နယ်ရှိ Tinder သည်ကောင်းဘွိုင်ဘွတ်ဖိနပ်များ၊ ထရပ်ကားများနှင့်တိရစ္ဆာန်သေကောင်များ၏အရည်ပျော်နေသောအိုးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ Vanderbilt အချို့သောလတ်ဆတ်သောမျက်နှာ, preppy မြောက်ပိုင်းရောနှောသို့ပစ်မထားဘူး, Belmont ရဲ့ကျောင်းသားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြည်နယ်များအတွက် hipster ခွဲတမ်းကျေနပ်အောင်နေစဉ်, အကောင်းဆုံးကို profile များကို Nashville ကဒေသခံများဖြစ်ကြသည်။ မြို့ထဲမှာတော်တော်များများကမြို့ပြနေရတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဟာတကယ်ကိုတိုင်းပြည်တစ်ခုပါပဲ။
၎င်းသည်သွေးစွန်းသောအဝတ်များဖြစ်ဖြစ်၊ Dakota ၏နှုတ်ခမ်းပေါ်မှပြုတ်ကျနေသောသမင်တစ်ကောင်၏ခေါင်းကိုဖြတ်လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သူပြုံးနေသောအပြုံးသည်သူသေနေသောသားရဲ၏ချိုကိုအပြည့်အဝဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ယခုသတ်ခဲ့သောတိရစ္ဆာန်နှင့်စပ်လျဉ်း။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်ဟုယူမှတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူကတော်တော်လေးကောင်းတဲ့လယ်မြေကိုပိုင်ဆိုင်တယ်။ ညာဘက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ
ဤတွင် Grayscale အသုံးပြုခြင်းသည် Justin သည် Tennessee ပြည်နယ်မုဆိုးမဟုတ်ကြောင်း၊ သူသေနေသောငှက်များကို artsy ကြည့်စေလိုကြောင်းထင်ရှားစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သူသည်အဓိကသူဖြစ်သည်ဟုယူဆပါကသူ၏ဝမ်းနည်းဖွယ်မျက်နှာကိုသူ့သူငယ်ချင်းများ၏နို့စို့အရွယ်များကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသူတို့ကသူတို့သည်သူ၏ Tinder ပရိုဖိုင်းကိုများအတွက် posing ပါတယ်ကိုငါသိ၏။
လူနှင့်သူ၏ခွေးပဲ! အသက်ရှင်နေထိုင်! သက်ရှိသတ္တဝါများအတွက်ရေ။ နှင့်လယ်ထွန်စက်ထောက်ပံ့! ဒါကတောင်အကြောင်းအားလုံးပါပဲ။
ဤအရာသည် TN တွင်သင်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသောပရိုဖိုင်းမျိုးဖြစ်သည်ဟူသောအချက်သည်ကြောက်စရာပင်
ပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရတာကတော့ဒီဟာက wannabe Country ကြယ်ပွင့်ရဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယောက်ျားရိုင်ယန်သည်နောက်လာကီဘရိုင်ယန်ဖြစ်လိုသည်။
ကျောက်နှင့်လိပ်လက်အမူအရာ၊ ဘေ့စ်ဘော ဦး ထုပ်ကိုအလွယ်တကူလွှင့်ပစ်လိုက်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်တောင်ပိုင်းစူပါစတားကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဒုတိယတစ်ချက်တွင် ပို၍ တုန်လှုပ်စေသောအမှန်တရားသည်မိမိကိုယ်ကိုဖော်ပြသည်။
ဒါကအပြုံးမဟုတ်ပေမယ့် grimace မဟုတ်ပါဘူး! တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကိုဒီဓာတ်ပုံကိုဆိုင်ထဲမှရှူလိုက်သည်။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေလား သူ့ရည်းစားလား သူ့အမေ တစ်ခုခုကိုလမ်းသူကကြီးမြတ်ထွက်လာသောငြင်းပယ်လို့မရပါဘူးနှင့်တကယ် Tinder အပေါ်သူတို့အားတိုင်းပြည် gals အတွက့့်ဆွဲသည်။ အားထုတ်မှုများအတွက်တစ် ဦး ။
ပျောက်ဆုံးရဲ့အားလုံး Cowboy ဘွတ်ဖိနပ်ဖြစ်ပါတယ်
ဒီရုပ်ပုံကသူရဲ့ဇီဝဗေဒမှာညွှန်းထားတဲ့ 'Nasty Nashville' ကိုအမှန်တကယ်ရုပ်လုံးဖေါ်သလား။ ဖြစ်ကောင်း။
Amirite LADIES လိုမျိုးသေနတ်ထည်လိုမျိုးဘာတစ်ခုမှမလိုချင်ဘူးလား?!
Equus သို့ပြောင်းပြန်ရှိ centaur သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောနိဒါနျးဖြစ်စေဤနည်းလမ်းသည်မငြိမ်ဖြစ်စေပါ။
Matt သည်သူ၏တိရိစ္ဆာန်များကိုရှင်သန်စေလိုသော်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လိုသည်။ Tennessee ပြည်နယ်ရှိ Tinder အပေါ်လုံးဝအလေးအနက်မထားသူမည်သူမဆိုချက်ချင်းအစိမ်းရောင်ကဒ်ပြားကိုခံထိုက်သည်။ ညာဘက်သို့ပွတ်ဆွဲပါ
အလားအလာရှိတဲ့ LinkedIn ခေါင်းကိုက်ခြင်းလား